Prespective Eyes ( 2019 ) | MM Movie Store
2019 10လပိုငျး21ရကျနကေ့ ထှကျခဲတဲ့ စိတျကူးယဉျဖနျတီးထားပွီးဘျောဒါတှကွေားကသံယောဇဉျခိုငျမွဲမှု မိသားစုအပေါအလေးထားမှုတှကေိုမွငျရမယျ့ဇာတျလမျးတဈပုဒျဖွဈပါတယျမှေးကတညျးက ကိုယျ့ဘေးကလူတှကေိုအမွဲကံဆိုးစခေဲ့တဲ့ဆငျးရဲလှတဲ့ရှီခငျြးဟာ အမှတျမထငျ အဘိုးကွီးတဈယောကျနဲ့တှရေ့ငျးထှငျးဖောကျမွငျနိုငျတဲ့မကျြလုံးအစှမျးကိုရခဲ့ပါတယျ…
သူ့မှာကငျဆာဖွဈနတေဲ့အဈကို့ကိုကုသပေးဖို့ ငှလေိုနခြေိနျအမှတျမထငျ ခငျြမငျးဆကျက. တံဆိပျခေါငျးကို ရခဲ့ပွီးသူဌေးလေးထနျရှောကျနဲ့အဆကိအသှယျရခဲ့ပါတယျ..ဒီလိုနဲ့ ယှငျနနျက ကြောကျစိမျးမှနျးဆ အလောငျးအစားပွိုငျပှဲမှာယှဉျပွိုငျဖို့ဖွဈလာတဲ့အခါ…
ရှီခငျြး ထနျရှောကျအဈကိုမုံ့နဲ့ရှောငျရှယျတို့က ဒီပွိုငျပှဲမှာအနိုငျရနိူငျပါ့မလား…ရှီခငျြးက ထှငျးဖောကျနိုငျစှမျးကိုသုံးပွီး အကောငျးဆုံးကြောကျစိမျးကိုရှာတှနေို့ငျပါ့မလား…တဈဖကျမှာလဲ ရှတွေိဂံကလူဆိုး ခြိုကျထျောကတံဆိပျခေါငျးကိုရယူဖို့ ထနျရှောကျကိုဖမျးခေါသှားတဲ့အခါကယျတငျပေးနိုငျပါ့မလား…ဆိုတာကိုဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ
2019 10လပိုင်း21ရက်နေ့က ထွက်ခဲတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးထားပြီးဘော်ဒါတွေကြားကသံယောဇဉ်ခိုင်မြဲမှု မိသားစုအပေါအလေးထားမှုတွေကိုမြင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်မွေးကတည်းက ကိုယ့်ဘေးကလူတွေကိုအမြဲကံဆိုးစေခဲ့တဲ့ဆင်းရဲလှတဲ့ရွှီချင်းဟာ အမှတ်မထင် အဘိုးကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရင်းထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအစွမ်းကိုရခဲ့ပါတယ်…
သူ့မှာကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အစ်ကို့ကိုကုသပေးဖို့ ငွေလိုနေချိန်အမှတ်မထင် ချင်မင်းဆက်က. တံဆိပ်ခေါင်းကို ရခဲ့ပြီးသူဌေးလေးထန်ရှောက်နဲ့အဆကိအသွယ်ရခဲ့ပါတယ်..ဒီလိုနဲ့ ယွင်နန်က ကျောက်စိမ်းမှန်းဆ အလောင်းအစားပြိုင်ပွဲမှာယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ…
ရွှီချင်း ထန်ရှောက်အစ်ကိုမုံ့နဲ့ရှောင်ရွှယ်တို့က ဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရနိူင်ပါ့မလား…ရွှီချင်းက ထွင်းဖောက်နိုင်စွမ်းကိုသုံးပြီး အကောင်းဆုံးကျောက်စိမ်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါ့မလား…တစ်ဖက်မှာလဲ ရွှေတြိဂံကလူဆိုး ချိုက်ထော်ကတံဆိပ်ခေါင်းကိုရယူဖို့ ထန်ရှောက်ကိုဖမ်းခေါသွားတဲ့အခါကယ်တင်ပေးနိုင်ပါ့မလား…ဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါ